header end: 08/10/2020 05:50:19.279 PM
Lapho usidinga, sizokusiza Ngemalimboleko ebizwa phecelezi ngokuthi yi-Personal Loan yase-DirectAxis eqala ku-R5 000…
Ngaphezulu eminyakeni engu-25, u-DirectAxis egunyazwe Njengomhlinzeki Wezinsiza Zezimali futhi eyingxenye ye-FirstRand Group. Kuleso sikhathi, sesinikeze izimalimboleko ezingaphezu kwesigidi futhi siyaziqhenya ngokuthi amakhasimende ethu angathembela kithi ngaso sonke isikhathi. Ngoba asinikezi kuphela izimalimboleko – sikholelwa ekusizeni abantu ukuthi benze izinto ezibalulekile, sisiza abantu ukuthi bathathe amathuba abawathola empilweni futhi sisiza abantu ukuthi bashintshe izimpilo zabo.
Ungakwenza lokho nathi.
Indlela esebenza ngayo Imalimboleko yase-DirectAxis:
Lapho udinga imali, khetha isisombululo semalimboleko esivumelana nesimo kanye nesabelomali sakho.
Khetha inani lemalimboleko olidingayo, kusukela, ku-R5 000.
Nquma indlela ozokhokha ngayo ihambisana nezidingo zakho, esukela ezinyangeni eziwu-24 ukuya eminyakeni ewu-6.
Uma kugunyaziwe, imali ingafakwa e-akhawuntini yakho yasebhange ngokushesha – oukuze uyisebenzise ngendlela okhetha ngayo.
Yini oyidingayo ukuze ufake isicelo:
Konke okudingayo yilokhu okulandelayo ukuze silungiselele isicelo sakho ngaleso sikhathi:
Iholo lenyanga elingekho ngaphansi kuka-R5 000
Imininingwane ye-akhawunti yakho yasebhange okukhokhwa kuyo iholo lakho
Ama-payslip ezinyanga eziwu-3 ezedlule (uma engekho, ungafaka izitatimende zasebhange ukhombise ngokusobala iholo lakho elikhokhiwe)
Kungadingeka futhi ukuthi uhlinzeke:
Ikhophi ecacile Kamazisi/ikhadi le-Smart ID
Idokhumenti yakamuva eqinisekisa ikheli lakho lasekhaya
Sicela uqaphele ukuthi: kungenzeka ucelwe ukuthi ufakazele i-debit order yakho
Imalimboleko yase-DirectAxis ihlale iza nemihlomulo eminingi.
Akukho sidingo sokuthi uzobuzwa imibuzo noma ukuthi ume emigqeni emide – yonke into ingenziwa ocingweni noma ku-inthanethi.
Ukuqinisekiswa kwezimali ezikhokhwayo ezingaguquki ngesikhathi semalimboleko sonke.
Ungakwazi ukusheshe ukhokhe noma ukuthi ukhokhe imali eningana ngaphandle kwenhlawulo.
Ukusebenzisana nenkampani Engumhlinzeki Wezinsiza Zezimali ogunyaziwe, eyingxenye ye-FirstRand Group, ehambisana Nomthetho Wezikwelethu Kazwelonke, futhi ezinikele ekugqugquzeleni ukubolekisa ngemali ngendlela engenabo ubudedengu.
U-DirectAxis uzohlala ebhekelela izimo zakho ngokwezezimali ukuze akunikeze imalimboleko ehambisana nezidingo kanye nesabelomali sakho.
Ungakhululeka ngenxa yokuthi uzothola umshwalense wokuvikela isikweletu oyi-Personal Protection Plan, ofakwa kuyo yonke imalimboleko ukuze ungabi navalo ngalutho. Lolu hlelo olungefaniswe luzovikela nanoma iyiphi imali yemalimboleko engakakhokhwa uma kwenzeka ushona noma ukhubazeka unomphela – futhi luhlinzeka nokuvikeleka okuthile ngokuphathelene nokukhubazeka okwesikhashana kanye nokudilizwa. Lolu hlelo lulungiswe ngokuhambisana nesimo sakho esiphathelene nengozi, ngakho-ke izinga lokuvikeleka lizohluka, kodwa uvumelekile ukuthi ukhethe umshwalense owehlukile, ohlinzeka ukuvikeleka okulingana nobuzokuthola.
main content end: 08/10/2020 05:50:19.294 PM
footer end: 08/10/2020 05:50:19.357 PM
gtm code start: 08/10/2020 05:50:19.357 PM
gtm code end: 08/10/2020 05:50:19.357 PM
page load start: 08/10/2020 05:50:19.185 PM Server 1 IdentifyAnonymousContact Method Call Started at:08/10/2020 05:50:19.185 PM IdentifyAnonymousContact Method Call Ends at:08/10/2020 05:50:19.185 PM